काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्दै
केही दिनयता काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकलेऔँल्याएको छ।
एक साताअघिसम्म दैनिक ४ देखि ४ सय ५० को हाराहारीमा संक्रमित संख्या रहेकोमा केही दिनदेखियता बढ्दै गएर दैनिक ७ सयको हाराहारीमा संक्रमित भइरहेका छन्। बुधवार उपत्यकामा चौबिस घण्टाभित्रमा परीक्षण भएका नमुनामध्येमा ६ सय ९७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ।
निषेधाज्ञा खुकु्लो भएसँगै भएको लापरबाहीको कारण संंक्रमण दर बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए। उनले साउनदेखि यता संक्रमित संख्या दैनिक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
उपत्यकामा संक्रमण बढेपछि अस्पतालमा बिरामी भर्ना हुने दर बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोलाले बताए। बाँस्तोलाका अनुसार यो अस्पतालमा दैनिक १५ देखि २० जना लक्षणसहितका बिरामी अस्पताल पुगेका छन्।
उनीहरू मध्येमा ७ देखि १० जना दैनिक भर्ना हुने गरेका छन् भने अस्पतालको २४ बेड क्षमताको आइसियुमा २१ जना भर्ना भएका छन्। डा. बाँस्तोलाका अनुसार संक्रमित हुनेहरूमा खोप केन्द्रमा खोप लगाउन लाइन बसेकाहरू मध्येबाट धेरै छन्। निषेधाज्ञासँगै नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड उल्लंघन गर्दै जानुले संक्रमण पुन उकालो लागेको डा. बाँस्तोलाको तर्क छ। ‘ हामीले कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेनौं भने यो थप भयावह हुन्छ,’ उनले भने। गत चौबिस घण्टामा नेपालमा परीक्षण भएका कुल १२ हजार ६ सय १६ वटा नमुनामध्येमा २८ सय २८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। थप संक्रमितसहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या ७ लाख २४ हजार ४ सय ५५ (एन्टिजेन परीक्षणसहित) छन्।
तीमध्येमा दोस्रो लहरको अवधिभित्रमा मात्र ४ लाख ५९ हजार २१ जना संक्रमित भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा २ हजार ६६ जना जनरल तथा एचडियुु शड्ढया भर्ना भएका छन् भने ३ सय ११ जना आइसियुमा भर्ना भएका छन्। तीमध्येमा १ सय ३८ जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
गत चौबिस घण्टामा थप ३० जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। थप मृतकसहित नेपालमा ९ हजार ९ हजार ६ सय ३७ जना पुगेका छन्। तीमध्येमा दोस्रो लहरको अवधिमा ६ हजार ३ सय ३६ जनाको मृत्यु भएको हो।
हाल नेपालमा कुल २६ हजार ८ सय ३२ जना सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्येमा २४ हजार ३ सय ४० जना होम आइसोलेसनमा छन् भने २४ सय ९२ जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर लक्षण भएका ६ सय २७ जनाको आइसियुमा र १ सय ७१ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०५:५७ बिहीबार